Directv ọ ga-akwalite nnata m n'efu? – Wikipedikia Encyclopedia?
Eziokwu is na ụfọdụ ndị na-ekiri nwere ike inweta a DIRECTV Genie upgrade n'ihi na free, ma ọ dị obere. Iji nweta ya, ị ga-oruru dị ka DIRECTV si iwu maka free ngwaike. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-enwerịrị otu ọnụ ọgụgụ TV ma ị na-akwụ ụgwọ ugbu a DIRECTV si Advanced erite Ego ọrụ.
N'otu aka ahụ, Directv ọ nwere ihe nnata ikuku?
DIRECTV enyela ndị ahịa ike ịnụ ụtọ ahụmịhe HD DVR niile nke ụlọ na-enweghị ọtụtụ waya na igbe na-abanye n'ụzọ, ekele ikuku Genie Mini (WGM). Ọ na-enye ọbụna mfe ụzọ maka DIRECTV ndị ahịa ka: Lelee, dekọọ, kwụsịtụ na weghachi mmemme n'ime ụlọ ọ bụla.
Ọzọkwa, Ego ole bụ igbe mgbakwunye maka Directv TV? Ọ bụrụ na imezughị nkwekọrịta mmemme gị, DIRECTV nwere ike na-ana gị ego akwadoro ruru $480. Ụgwọ gị maka nke mbụ erite agbaghara. Nke ọ bụla agbakwunye ụgwọ ụgwọ $ 5.00 / ọnwa. Site na ịhọrọ DVR ma ọ bụ HD DVR erite, a ga-edenye gị aha ozugbo na ọrụ DVR.
Kedu ihe onyonyo Directv dị njikere?
Kedụ ka m ga-esi lee DVR nke m anya n’enweghị ọrụ?
Kedu ka esi emekọrịta directv?
Kedu ka m ga-esi eji RVU na Samsung TV m?
Ndị nnata ole directv na-enye ohere?
Kedu ihe bụ RVU na nlekọta ahụike?
Ego ole ka ndị natara directv?
Gịnị bụ Directv amara oge?
Kedu ụdị nnabata Directv ka m nwere?
Gịnị bụ Directv njikere ngwa na Sony TV?
Kedu efere satịlaịtị m chọrọ maka DirecTV hd?
Kedu ihe bụ ọrụ nnata dị elu na directv?
Kedu otu m ga-esi kwalite nnata directv m?
Kedu otu m ga-esi gbanye Directv njikere TV?
Kedu ka Directv njikere si arụ ọrụ?
TV ole nwere ike iji directv ugbu a?
Kedu otu m ga-esi lelee Directv DVR na laptọọpụ m?
Directv ọ nwere ụgwọ zoro ezo?
Achọrọ m genie mini maka TV ọ bụla?
Directv wireless genie ọ bara uru?
Kedu ihe bụ akụrụngwa Directv kacha ọhụrụ?
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị weghachighị akụrụngwa directv?
Kedu ihe ngwugwu Directv?
Nnata Directv m adịla njikere 4k?
Gịnị mere na directv m agaghị ejikọ?
Kedu otu m ga-esi jikọọ Smart TV m na DirecTV?
Ego ole ka Directv Genie na-eri?
Kedu otu esi ejikọta WIFI na DirecTV?
Directv Genie ọ na-eji WIFI?
DIRECTV Njikere TV
(2012-2014) Smart TV niile ewezuga 5201, 5203, 6201, 6203.
Onweghi uzo a mara iji nweta ihe ndia -enweghị arụsi ọrụ ike Ọrụ DVR. N'ezie, enwere. Kwupu ya DVR site na efere, akara ekwentị na njikọ netwọk ọ bụla tupu ịkpọtụrụ DirecTV ịkagbu ma ọ bụ kwụsịtụ ọrụ. The DVR agaghị enweta ozi na-enweghị ikike, yana ndekọ ka ga-ahụ anya.
Jiri aka mee ihe n'ebe dị anya Genie
Tụtụ aka n'ọdụ ụgbọ mmiri nke dị na igbe Genie gị, wee pịa ma jide Mute na Họrọ bọtịnụ ruo mgbe ọkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị na ime ime na-egbuke egbuke ugboro abụọ.
Tinye koodu 961 na igodo ime ime.
Pịa bọtịnụ Up Channel.
Ihe onyonyo a ga-egosipụta "Edobela ebe nchekwa gị ugbu a maka RF."
Ka ịhọrọ NZP isi mmalite, ojiji bọtịnụ SOURCE dị na gị Samsung TV ime ime. Ị ga-ahụ akara ngosi DIRECTV dị ka otu n'ime isi mmalite, a ga-akpọkwa ya "NZP" Iji mee ka onye ahịa Genie rụọ ọrụ, ị ga-ebu ụzọ tinye ya na akaụntụ gị. Kpọọ 1-800-DIRECTV ka ịtinye onye ahịa Media Center na akaụntụ gị.
Ndị nnata 15
Site na Wikipedia, akwụkwọ nkà ihe ọmụma efu. Nkeji uru emetụtara (ND) bụ nha uru ejiri na usoro nkwụghachi ụgwọ Medicare nke United States maka ọrụ dọkịta. ND bụ akụkụ nke ọnụ ahịa uru dabere na akụrụngwa (RBRVS).
Naanị 2 fọdụrụ na ngwaahịa - nye iwu n'oge adịghị anya. Dị na ngwaahịa. Ngwaọrụ a na - enye ụdị ọhụụ ọhụụ DIRECTV erite jikọọ n'ụlọ gị WiFi ma ọ bụ wired netwọk. Ozugbo ejikọrọ, ị ga-enwe ike ịnweta ọtụtụ atụmatụ nke DIRECTV.
Top Họrọ Ngwaahịa na Nyocha.
Ahịa: $ 162.48
Ị chekwaa: $ 37.51 (19%)
Họrọ "NJỌ Oku”Ma ọ bụ“ TVmail & NJỌ Oku”Site na isi NchNhr. Họrọ “Gbanye Ọkwa.” Iji gbanye atụmatụ a na a Ihe ntụgharị vidiyo DVR, pịa "NchNhr" na DirecTV n'ime obodo. Họrọ “NJỌ Oku & Msgs. ” Họrọ "Dezie Ntọala." Họrọ “NJỌ Oku. " Go gaa na taabụ "Ịma Ọkwa".
erite nkọwa na ntanetị
Gaa na Akụrụngwa & Njirimara. N'okpuru Ndị nnata, ị ga-ahụ ndị nnata ị nwere gbakwunye nkọwa dịka nọmba Oghere Usoro ahụ, Nọmba Kaadị nnweta, na ndị ọzọ.
DIRECTV-njikere, ma ọ bụ “NZP” dị ka a na-akpọbu ya, bụ teknụzụ na-emegharị onye ahịa Genie na ngwanrọ. Enwere ike itinye ngwanrọ ahụ n'ime smart TV dị ka ihe ngwa. Ọ bụ echiche dị nro. Cheedị echiche nke ọma TV na Netflix, Hulu, na DIRECTV niile wuru na.
Ugbu Efere Satellite
Slimline-3 efere bụ gị niile mkpa n'ọtụtụ ahịa. Ọ na-enweta SD na HD mmemme site na DIRECTV si 99,101, na ebe 103. Ndị a satellite ebe na-ebu ihe niile DIRECTV si Ọwa mba nke asụsụ bekee.
"Ọrụ nnata dị elu” bụ ego ị na-akwụ maka HD DVR. Ọ na-enye gị ohere ikiri ma dekọọ mmemme HD wee kesaa mmemme ahụ n'ụlọ ọ bụla nwere ike erite. Ọ na-enye gị ohere ịnweta Pandora, On Demand na ngwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ego ị na-akwụ maka ikiri telivishọn n'ụzọ gị.
Edemede dị iche gbasara DIRECTV Ready TV dị.
Jikọọ DIRECTV Njikere TV na Genie HD DVR na ebe nnweta site na iji eriri ethernet.
Gaa n'ọnụ ụlọ ebe DIRECTV Ready TV dị.
N'ihuenyo ụlọ, họrọ Ngwa.
N'okpuru otu ngwa, họrọ DIRECTV Njikere.
A DIRECTV Jikere TV nwere teknụzụ a na-akpọ RVU wuru na nke na-enye gị ohere ịnụ ụtọ DIRECTV ọrụ yana ọrụ DVR HD zuru ezu na-enweghị onye nnata mgbe ejiri ya dị ka TV agbakwunyere na ntọala Genie HD DVR.
Watch Ihe nkiri TV ma ọ bụ iyi
Meghee DIRECTV Ngwa wee pịa Watch your DVR. Họrọ Gbanye DVR wee họrọ ihe ngosi ma ọ bụ ihe nkiri ọ bụla edere nke ọma n'aka gị DVR ndepụta ọkpụkpọ. Họrọ akụ ala ka ịmalite nbudata ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri na ngwaọrụ gị. Kpatụ nbudata m wee họrọ ihe ngosi ịchọrọ ekiri.
N'adịghị ka ọtụtụ ndị na-eweta eriri USB, DIRECTV anaghị akwụ gị ụgwọ maka DVR. Ị nweta ụgwọ mgbazinye na ọrụ Genie DVR ego gụnyere n'ime gị DIRECTV ngwugwu — mba ụgwọ zoro ezo Ebe a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ n'ihu ihe karịrị otu TV, n'agbanyeghị, ọ ga-efu gị $7 kwa ọnwa maka nnata ọ bụla ọzọ.
Achọrọ otu TV ejikọrọ na wired Genie HD DVR na ikuku ikuku Genie Mini maka onye ọ bụla ọzọ TV. Machie nlele 3 dịpụrụ adịpụ n'otu oge. DIRECTV HD DVR nnata – HD DVR nnata na-enye gị ohere ịdekọ, kwụsịtụ na weghachi ihe ngosi. Echegbula onwe gị ma ọ bụrụ na ị chefuru ịpị ndekọ.
chọta ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet n'azụ TV gị.
jikọọ eriri Ethernet site na rawụta gị na ọdụ ụgbọ mmiri na TV gị.
họrọ NchNhr dị n'ime ime TV gị wee gaa na Ntọala netwọkụ.
họrọ nhọrọ iji mee ka ịntanetị nwee wired.
pịnye paswọọdụ Wi-Fi gị site na iji bọtịnụ ime ime gị.
Ngwaọrụ ọ bụla akwụ ụgwọ $7.00 kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịrapara na ya DIRECTV nwa oge, zụta nke gị Genie Obere Ọ ga-echekwa ego n'ikpeazụ, ị nwere ike nweta ụdị ikuku na ikuku na Amazon.
Jini HD DVR1 na-ahapụ ezinụlọ gị niile ịnụ ụtọ ihe ngosi kachasị amasị ha n'ime ụlọ ọ bụla, na ngwaọrụ ọ bụla. Dekọọ ihe ngosi 5 ozugbo wee chekwaa ihe nkiri HD ihe ruru awa 200 ka ị na-ekiri oge ọ bụla ịchọrọ. Nyochaa DIRECTV ngwugwu nwere Genie HD DVR.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọtụtụ Ndị nnata DIRECTV A na-agbazinye ego ejiri mee ihe na akaụntụ obibi. Nke a pụtara na erite ga-abụrịrị laghachiri ozugbo nkwekọrịta ahụ kwụsịrị. Ọ bụrụ na ị kagbuo gị DIRECTV akaụntụ na alaghachila na erite(s), DIRECTV ga-akwụ ụgwọ ị maka ya.
Ị ga-enweta ọkwa nkwubi okwu ụbọchị iri na ise tupu ụbọchị emechie. Ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ nkwụghachi ụgwọ gara aga tupu ụbọchị emechiri gị, ị ga-adị mma maka ọnwa ọzọ. But If your service is interupted , Ị ga-akwụ ụgwọ zuru ezu ego ruru na akaụntụ tupu ọrụ na-eweghachi.
Enwere oke isii Ihe ngwugwu DIRECTV ịhọrọ site na: Họrọ, ntụrụndụ, Nhọrọ, Xtra, Ultimate na Premier. Atụmatụ ọ bụla zuru oke maka ụfọdụ mmefu ego ma ọ bụ ụdị ihe nkiri TV. Na Premier, ị ga-enweta ihe karịrị ọwa 330, gụnyere ọdịnaya adịchaghị mma dị ka HBO, STARZ na Cinemax.
Nata DirecTV 4K ọwa, ịkwesịrị inwe a Direct-TV dakọtara 4K Ultra HD “RVU” TV (kpọmkwem DirectTV 4K-njikere Ọ bụ Samsung, LG, na Sony na-enye TV) na njikọ nke DirecTV Genie Ụdị HR54 ma ọ bụ HS17 Set-Top igbe. Ị ga-edebanye aha na DirecTV si Họrọ ma ọ bụ karịa ngwugwu mmemme.
Tọgharia njikọ netwọk na onye ọ bụla na-anabata ihe. Ọ bụrụ na onye nata ahụ egosighi na Network na Intaneti dị ejikọrọ, ma ọ bụ ọ bụrụ jikọọ Ugbu a anaghị arụ ọrụ, lelee eriri gị Njikọ ma tọgharịa rawụta na Broadband DECA. Ikwesiri ikwuputa ihe ntinye SWM wee pinye ya na ya.
jikọọ otu njedebe nke HDMI cable na DirecTV onye nnata. jikọọ na nsọtụ nke ọzọ na otu nke HDMI ntinye na Samsung telivishọn. Gbanyụọ igwe onyonyo gị. Jiri igwe ntaneti telivishọn gị ka ị gbanwee ntinye iji kwekọọ na njikọta ị họọrọ.
Jikọọ Genie HD DVR site na iji Wi-Fi echedo Setup (WPS)
Pịa MENU na ime gị.
Họrọ Ntọala & Enyemaka> Ntọala> Ntọala netwọk> Jikọọ Ugbu a.
Mgbe usoro achọpụta ọnọdụ njikọ, họrọ Tọọ ikuku.
Họrọ Push Button Mbido.
Pụgharịa bọtịnụ WPS (nke nwere akara ngosi) na rawụta gị.
Kedu ihe e5 pụtara na ọkụ eletrik?